Baolina Kitra – “Pro League” :: Mila vola manodidina ny 300 tapitrisa ariary farafahakeliny ny klioba iray • AoRaha
Baolina Kitra – “Pro League” Mila vola manodidina ny 300 tapitrisa ariary farafahakeliny ny klioba iray
Hiditra amin’ny raiki-pohy vaovao ho any amin’ny matihanina kokoa ny fiadiana ny ho tompondakan’I madagasikara manomboka amin’ity taona ity. “Pro League” no anarana iantsoana azy io ka klioba roa ambin’ny folo, nanaiky ny fepetra rehetra ilaina sy tsy noterena, no hifaninana manomboka amin’ny faran’ny herinandro ho avy izao. Hazakazaka hiadiana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’I afrika isan-tarika no tena tanjona saingy hoentina hampitomboana ny fifaninanana ho an’ireo klioba elita ihany koa izany.
“Mafimafy ihany saingy rehefa te hanova dia mila misikim-ponitra”, hoy i Mirado Rakotoharimalala, sekretera jeneralin’ny fikambanan’ireo klioba Elita eto Madagasikara (CFEM), mpiara-miombon’antoka amin’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra amin’ny fikarakarana ny “Pro League”. Manodidina ny 200 hatramin’ny 300 tapitrisa ariary, farafahakeliny, no ilain’ny klioba iray hanatanterahana manontolo an’io fifaninanana io. Klioba roa ambin’ny folo no hifaninana amin’ny lalao mandroso sy miverina mandra-pahatongan’ny 21 jona, fiafaran’ny fifaninanana hahafantarana izay hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika isan-tarika.
“Misy amin’ireo klioba no mandany mihoatra an’izany saingy mbola tsy noferana toy ny any amin’ireo fifaninanam-pirenena any ivelany, any Eoropa, ny vola hampiasaina”, hoy hatrany ity sekretera jeneraly ity. “Mbola nomen’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra “licence” manokana ireo klioba roa ambin’ny folo ireo hamitana ny taom-pilalaovana. Amin’ny taona ho avy kosa dia takiana ny “Licence des Club FMF”, izay mbola moramora kokoa noho ny an’ny kaonfederasiona na ny an’ny Federasiona iraisam-pirenena”, hoy hatrany izy. Fantaro ireo rehetra tsara ho fantatra momba an’ity “Pro League” ity.
Manodidina ny 200 hatramin’ny 300 tapitrisa ariary, farafahakeliny, no vola ilain’ny klioba iray hamitana ny fifaninanana rehetra amin’ny “Pro League”. “Mbola tsy voafaritra ny tena vola holanianay amin’io fifaninanana io. Ny fandehanana mamonjy lalao any an-tanin’olona, izay tsy maintsy ataon’ny klioba tsirairay, no tena mampiakatra ny fandaniana”, hoy i Jasmina Ravelonarivo, filohan’ny klioba Ajesaia avy any Bongolava. Efa isan’ireo niatrika ny lalao izy ireo tamin’ny taon-dasa ary nisafidy ny handray ireo mpifanandrina aminy eto Antananarivo, raha tany Tsiroanomandidy tamin’ny taon-dasa.
“Lafolafo kokoa ny fandaniana ho anay sy ny Club M Mananara, raha miohatra amin’ireo klioba sasany, satria tsy maintsy mamonjy an’i Fianarantsoa izahay rehefa hampiantrano lalao. Efa fandaniana hafa indray izany ny fandehanana avy eto Ihosy mankany Fianarantsoa. Toy izany ihany koa ny an’ny Club Mananara, izay avy any no hamonjy an’i Toamasina”, hoy Razafiarison Ratsimanotry na i Zidane, filohan’ny ligin’Ihorombe, misy ny FCA Ilakaka.
Nanaiky tsy nisy noterena ireo klioba roa ambin’ny folo hifaninana amin’ny “Pro League”, araka ny nambaran’ny sekretera jeneraln’ny fikambanan’ireo klioba elita eto Madagasikara (CFEM). Ireo klioba valo tamin’ny taon-dasa, izay niatrika ny lalao mandroso fotsiny (Fosa Juniors Elite, AS Adema, Cnaps Sport, AS Jet Mada, Ajesaia, Zanakala FC, FCA Ilakaka ary 3FB Toliara), niampy an’ireo klioba roa tafita tamin’ny fifaninanam-pirenena diviziona voalohany (Tia Kitra FC sy Club M Mananara) no tokony hiatrika an’ity fifaninanana ity. “Rehefa nifampidinika ny fikambanana sy ny federasiona dia hofenoina roa ambin’ny folo izany. Tamin’ny alalan’ny isa nomena an’ireo klioba rehetra nandritra ny fandaharana azy ireo no naha voafantina ny Elgeco Plus sy ny Cosfa ho tafiditra”, hoy hatrany ity sekretera jeneralin’ny CFEM ity. Izy ireo no heverina ho tsara toerana indrindra tao anatin’ny dimy taona (2015 – 2019). Hiatrika lalao mandroso sy miverina izy ireo manomboka amin’ny 26 oktobra 2019 ho avy izao ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 21 jona 2020.
Fivarinana sy lalao sakana
Rehefa tapitra ny fifaninanana dia midina avy hatrany ho any amin’ny ligy nihaviany ny klioba mitana ny laharana faha-12 farany. Miakatra kosa hisolo ny toerany ny laharana voalohany amin’ny fifaninanam-pirenena diviziona voalohany, handraisan’ireo klioba 22 avy amin’ireo ligim-paritra eto Madagasikara miampy an’ireo klioba roa avy amin’ny ligy nisolo tena an’i Madagasikara tamin’ny fifaninanana kaontinantaly. “Mbola hiatrika lalao sakana kosa ireo klioba laharana faha-10 sy faha-11 ka ireo laharana faharoa sy fahatelo avy any amin’ny diviziona voalohany no hifanandrina amin’izy ireo. Toerana roa no ilaina amin’izany ka hijanona ho roa ambin’ny folo ihany ireo klioba mandray anjara amin’ny Pro League 2020”, hoy hatrany ity sekretera jeneralin’ny fikambanan’ny CFEM ity.
Fanampiana sy loka
Maro tamin’ireo klioba ireo no nanoso-kevitra mba hisian’ny fanampiana azy ireo hamitana ny fifaninanana Pro League. “Mbola an-dalana ny fifampiresahana amina mpanohana iray ary inoana fa ho avy miandalana izany. Mino aho fa tsy maintsy hisy ny fanampiana omena an’ireo klioba mandray anjara”, hoy i Mirado Rakotoharimalala. Miankina amin’ny vola azo sy ireo fanampiana avy amin’ireo mpanohana ihany koa ny loka omena an’ireo telo voalohany, izay tsy hitovy amin’ny an’ireo ambiny. “Ny azo antoka aloha dia samy hahazo ny anjarany avokoa ireo klioba rehetra mandray anjara”, hoy hatrany izy. Ankoatra izany dia ho an’ireo klioba roa sy ny ligy mampiantrano ny vola rehetra azo amin’ny lalao raisin’izy ireo.
Mbola nohalefahana ny fepetra tokony ilaina mba ho tonga klioba mpifaninana eo amin’ny “Pro League”, tamin’ity taona ity. “Tsy maintsy miala amin’ny fifaninanana teo aloha isika ary teny ierana tamin’ireo klioba ireo izany. Nanaiky avokoa ny rehetra ka nangataka tamin’ny federasiona mba hanalefahana ny fepetra aloha amin’izao fanombohana izao. Nanaiky izany izy ireo”, hoy ny sekretera jeneralin’ny CFEM. Mitentina 500 000 ariary ny saram-pisoratana anarana ho an’ireo klioba mifaninana.
Amin’ny taona ho avy kosa dia hihenjana amin’ny fitakiana ny “Licence des Club FMF” ny federasiona sy ny CFEM. Isan’ireny ny tsy maintsy hananan’ny mpanazatra ny “Licence A”, ny fisian’ny rafitra mipetrapetraka eo amin’ny fitantanana, ny fananana kianja fanaovana fanazaran-tena, ny fananana ekipa ho an’ny tanora mpandimby sy ireo maro hafa. “Na izany aza dia tsy nampitoviana tamin’ny fitakiana nataon’ny kaonfederasiona sy ny federasiona iraisam-pirenena ho an’ny klioba miatrika lalao iraisam-pirenena izany fepetra izany”, hoy hatrany ny fanazavan’ity sekretera jeneraly ity.
Nohon’ny fandraisana anjaran’ny Fosa Juniors Elite amin’ny fiadiana ny amboaran’ny kaonfederasiona afrikana, handraisan’izy ireo ny RS Berkane avy any Maraoka amin’ny alahady ho avy izao, dia notapahan’ny mpikarakara ny Pro League fa hihemotra amin’ny fotoana manaraka ny fifanandrinan’izy ireo sy ny Ajesaia, tokony hatao eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’ny alahady ho avy izao. Hotanterahina amin’ny alarobia 27 novambra izany.
Kolontsaina maroloko :: Hanabe voho ireo fiteny malagasy marolafy ny « Akory E!